Shona News - Week 26 - The Zimbabwean
HARARE – VaJoseph Msika, vakambobata chinzvimbo chemutungamiri wenyika, vakazobvuma kuti kubvutwa kweminda kwakangobatsira hama neshamwari dzaPresident Robert Mugabe, idzo dzisiri kutombokwanis
a kushandisa minda inokosha yavakatora – izvo zvakonzerawo kushaikwa kwechikafu munyika.
Vachitaura apo vaMugabe vakange vari kuGambia kumusangano weAfrican Union VaMsika vakashoropodza kugovewa kwakaitwa minda uko kwaingonzi wese anoda ngaatore.
“Hatina kumbogara pasi tikatarisa kuti munhu uyu watiri kupa munda anogona kurima here, murimi here, achaita kuti nzvimbo iyi ibudirire here?”
Vakashoropodza vanhu vavanoti vakangoenda kunotora dzimba dzaigara varimi vechichena.”Zvavari kuita ndezvekungogara mudzimba idzi, voti vanoda minda, tovapa, asi vongorima twuminda tudiki-diki voti zvakwana.
“Takatora minda iyi, asi tave kuishandisa pakutsvaga kudiwa nevanhu tichisiya basa reminda yacho rekusimudzira budiriro nekurima,” vakadaro vaMsika.
Zimbabwe yaimbove dura redzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica, asi iye zvino ndiyo yave kutopemha zvokuti vanhu vanopona nemukomondera unobva kunze wakatowanda kudarika vari kupona nechikafu chemunyika.
– NeMunyori Wedu
Mugabe’s happy natives
Tava vanhu vaMugabe here?
HARARE – Kuramba kwaPresident Robert Mugabe kuti hupfumi hweZimbabwe hwaparara uye Zimbabwe kuti haidi rubatsiro kubva kune dzimwe nyika kunoratidza kuti vaMugabe vacho zvese nebato ravo vave kutopenga kana kuramba kuona zviri pachena.
Izvi zvakataurwa naVaNelson Chamisa, munyori wezvekuburitswa kwemashoko muMDC, vakawedzera vachiti, “VaMugabe vari kutevedzera gwara ravaIan Smith avo vakamboburitsawo mashoko ekuti Zimbabwe ndiyo nyika yaiva nevanhu vatema vaifara zvikuru. VaMugabe vari kuti vane vanhu vanofara, uye vasina chavanoshaya. Izvi ndizvo zvinoita vatongi vose vechidzvinyiriri, nokuti vanenge vachizvinyepera. Kana vaMugabe vachiti vanhu havana chavanoshaya, kuti vanenge vachireva vanhu venyika ipi chaizvo!”
VaChamisa vakati kupindura kuri kuita vaMugabe kumatare enyika dzepasi rose anoda kubatsira kunoratidza kutotukirira vanhu vemuZimbabwe vasati vachaziva pekubata nenhamo.
“Zanu (PF) yazara ropa revanhu vose vakarohwa, kuuraiwa nekushungurudzwa. Kusava nehanya necvanhu vemuZimbabwe kweZanu (PF) kunoratidza kuti yakatosiyana mawonero ayo nevanhu zvinototyisa.”
MDC inoti Zimbabwe inotoda chirongwa cherubatsiro chikuru kubva kumapazi esangano renyika dzepasi rose nekukurumidza.
“Mativi ose ehupfumi hwenyika anoda rubatsiro. Nyika yacho yatowora, uye yapindwa nechirwere chinotoda kurapiwa.
Ivo vaMugabe vacho vanotoda kurapiwa nekukurumidza. Umbowo hwacho hwazara nyika yose.
Zvikwereti zvenyika hazvichabhadhariki, mitengo yacho haichagadziriki – yongoramba ichingokwira; mari yekunze yekutenga kana pepa chairo rekuti mabazi ehurumende ashandise yoshaikwa,” vakadaro vaChamisa.
Masvondo apfuura aya vatungamiri veMDC vange vachifambira maruwa kuti vanzwe kubva kuvanhu kuti totora gwara ripi kuti tibvise nyika parumananzombe.
Vanoti basa iri razopera; vava kuziva zvinodiwa. Zimbabwe inotoda kuzvarwa patsva, nebumbiro remitemo idzva uye sarudzo isina zveutsotsi, zvozoteverwa nekunyaradzana nekuvaka Zimbabwe ine hutongi hweruzhinji.
“Kuratidzira kwacho kunofanira kungoitika kamwe chete zvose zvobva zvadengenyeka, nyika yogadzikana pachinguva chidikidiki. Dai vanhu vose munyika vakauya kuzotibatsira kuudza vaRobert Mugabe kuti nguva yavo yakwana.” – NeMunyori Wedu
VokwaMutambara vakarohwa kuMabvuku
HARARE – Mumiririri muparamende webato reMDC rinotungamirirwa navaMutambara kuHarare North Mai Trudy Stevenson nevamwe vatungamiri vana vakazvindwa kuMabvuku vakasiyiwa vaita sevafa – apo vakahwandirwa nechikwata chevechidiki vaikwana makumi mana vachifungidzirwa kuti ndeveMDC inototungamirwa naVaTsvangirai..
Linos Mushonga, Simangele Manyere, Tawanda Udzerema naLackson Mudachira vakange votobuda muMabvuku namai Stevenson apo motokari yavo yakamiswa pedyo neCircle Cement.
“Mhondi idzi dzakavhara nzira ndokutanga kukanda matombo vachipwanya mahwindo, ndokudhonza vatungamiri vaya kubva mumotokari yacho, kwava kuvarova nechose chavaikwanisa kusimudza kusanganisira zvitinha, masimbi nematanda, vakadaro vaGabriel Chaibva, mumwe wevatungamiri vekwaMutambara.
VaTendai Biti, munyori weMDC yekwaMorgan Tsvangirai, vakashoropodza nyaya iyi, vachiti dai mapurisa akakwanisa kubata mhondi idzi.
“MuMDC tagara hatiiti zvekushandisa chisimba kuvhara vanhu vanofunga zvakasiyana nesu. Hatisi kuzochinja ipapo nokuti tinotozivikanwa sebato rerunyararo. Tinotokoshesa kuwanda kwemafungiro akasiyana-siyana mubato redu sezvatakangotanga takaita,” vakadaro vaBiti.
Vakati nhengo yose yeMDC inongowanikwa iine mhosva ichadzingwa sezvo zvekurova vamunopikisana navo zvaiva zveZanu (PF) kwete MDC.
Muburitsi wemashoko wemapurisa VaWayne Bvudzijena, vakaudza pepanhau rino The Zimbabwean kuti vakange vasina chavaiziva nenyaya iyi. Mushure vakazoudza veZimonline kuti vakange vachangoudzwa zvakaitika kuMabvuku.
Asi vaChaibva vaiti vanhu ava vakatoendeswa kuchipatara nemotokari dzemapurisa, uye vakange vabirwa zvinhu zvavaiva nazvo kusanganisira macell phone, mari, mabhegi emadzimai, shangu, nezvimwewo zvinokosha.
Vakati Mai Stevenson vakatemwa nekademo mumusoro, vakatyorwa ruwoko; vaMushonga vakatyorwa minwe inonzi ichatochekwa; vaManyere vakarohwa nemubhadha vakabva mazino nekutyorwa shaya.
VaChaibva vakati: “Aka hakasi kekutanga izvi zvichiitwa nevanhu vamwe chete ava,” akadoma mazita evamwe vaaiziva ndokukumbira mapurisa kuti awone zvekuita.
Meya vakaponesa WOZA
BULAWAYO – Mazana mashanu emadzimai eWoza akaenda kunoratidzira kuna Meya weBulawayo, VaMayor Japhet Ndabeni-Ncube, nenyaya yekodzero dzevatengesi kuita basa ravo murunyararo.
Vamwe vavo vakabvumirwa kunoona Meya, vakamukumbirisa kuti asateedzera chirongwa chehurumende chekupazira vatengesi nzvimbo dzavo dzekutengesera.
Meya akapiwa svondo kuti aregere mabasa ekushusha vanhu vari kuzvitamburira nakare, nokuti aizovingwa neWOZA.
Madzimai eWOZA muBulawayo mazhinji anotengesa pamisika uye vaneta nekutorerwa zvinhu zvavo. Mumwe wavo akange akatakura bepa rakanyorwa kuti “Mwana asingacheme anofira mumbereko.. “
Vakaratidzira paRevenue Hall vakafamba vachienda kuTower Block, ndokumbozorora panze peCity Hall vachiimba nziyo dzekuti vaida kubvumirwa kutengesa chete.
Mumwe mukuru weKanzuru akadaidza mapurisa, pakabva pasvika mupurisa aizviti ndewerunyararo.
Asi Meya akabva apindira akati madzimai aya aiva vana vauya kuna baba nezvichemo saka pakange pasina chekuvasungira. Akaverenga zvakange zvakanyorwa pamapepa emadzimai aya akavimbisa kuona zvaangaite.
Madzimai asati ayenda mupurisa werunyararo uya akavabvunza nezvehutungamiri hweWOZA nekune mahofisi avo, uye kuti vaiva nemvumo here yekuratidzira
Madzimai akamupindura kuti pamutemo vaiva nekodzero yekuratidzira murunyararo uye vakati madzimai ose airatidzira ndiwo aiva mashefu eWOZA. Akaramba achivimbisa kuvasunga, asi musi uyu hapana akasungwa. Ashaya zvekuita, akati kumadzimai abvise tsvina yavakange vasiya pamahofisi ekanzuru.
Zvakadaro mamwe madzimai makumi matanhatu nevatatu vakasungwa paZuva rerudo (Valentine) vakamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga, vakanzi vagozodzoka musi wa 11 July gore rino. – NeMunyori Wedu.